inkondlo Archives - Mytika Speak
Ikhaya / inkondlo
Umaki - inkondlo
Sondela esibukweni, ubone ukuthi kuhle kangakanani? Izinhla ze-Ego, zihlutshulwe ngaphandle Ukuqhubeka kusuka kunoma yini, ubuhle obuncane obubonayo. Noma ngubani othola ...
Akekho umuntu ophelele, ngabezwa bethi, banikeza i-Ego isizathu sokudlala. Ngikubuyisele emuva, ngawo wonke amathuba, kepha impilo ibinendlela yokuzama ukungicindezela ...
Impilo yenzelwe bonke Akugxilwanga kumuntu nje Amakhwela ezinja awubufakazi - Khuluma
Ukubekezela ingane yangaphakathi Musa ukumemeza lapho ubumsulwa bukhanyisa Ukukhanya kwakho kuzonqoba - Khuluma
Isesha indlela. I-Moonlit sky isebenza njengomhlahlandlela. Inhliziyo izizwa isekhaya.
Izithunzi zivela ebumnyameni Zenza ubuchopho bubone ukujula, lapho kungekho khona ukuqonda okwakha impilo - Khuluma
I-Idea Ukwehlukaniswa Kwehlukaniswe kabili futhi kwasakazeka Ukuthola indlela yethu yokubuyela phakathi kwabaningi Ukwazi omunye nomunye ngomuzwa Wokuthatha izinqa ezinkulu futhi sazi ukuthi ...
Ukukhanya okukhona njalo Kuzungeze indawo emnyama ebizwa ngokuthi i-space Stars ukubona kancane kwekhaya - Khuluma
Mashi 28, 2021
Izimpiko ezintsha sha zokholo. Zijabule njengomdlwane, ama-Adventures alindelwe.
Mashi 27, 2021
Ukuphuthuma kuvela ku-Isikhathi Sokucabanga ukuthi kunomkhawulo Akukuvumeli ukuthi ubone ukuthi akukho - Khuluma
Kuthiwani uma ngingeyona ingxenye yalo mhlaba?